Bankcoin Akaụntụ Banyere Akaụntụ Banyere na Accepting Cryptocurrency
Bankcoin Akaụntụ Bank Banki
Isi nke ego
Bitcoin na cryptocurrencies ndị ọzọ dị ọkụ, isiokwu na-agbanwe taa. Agbanyeghị, ọtụtụ ozi na-enugharị gburugburu na ọ nwere ike ime ka iji Bitcoin yie ihe mgbagwoju anya. N'ikwu eziokwu, Bitcoin dị mfe iji. Dịka ile ekiri telivishọn, ọ dịghị mkpa ka ị ghọta ihe mgbagwoju anya nke etu esi arụ na TV iji nwee ike iji ya.
Ozugbo inwere Bitcoin, ịnwere ike ịchọrọ ịbanye na ya site n'ụzọ ọdịnala. A sị ka e kwuwe, ọ bụghị onye ọ bụla ụlọ akụ na-anabata Bitcoin. N'otu oge ahụ, ị ​​nwere ike ịchọ ijide ọkwa nke nzuzo na amaghị aha na ego dijitalụ. Iji mezuo nke a, ọtụtụ ndị na-achọ maka mkpuchi ma ọ bụ Banyere akụ bank nke Bitcoin. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha chọrọ ebe ha ga-echekwa e-ego ha site na ngwa dị na ekwentị ha; ma ọ bụ ebe ịgbanwe ya ka ọ bụrụ ego ma dọba ya na mba ọzọ site na iji uru mbupụ ala.
Maka azịza dị mkpirikpi, ị nwere ike iji mkparịta ụka ma ọ bụ ụdị ajụjụ dị na ibe a nwee nkwurịta okwu. Anyị nwere ike ịnweta akaụntụ akụ na ọdụ ụgbọ mmiri nke nwere ike ịba Bitcoin na ndị ọzọ cryptocurrency. Ka ọ dịgodị, gụọ n'ihu maka nkọwa ndị ọzọ.
Kedu ihe bụ Bitcoin?
Nke mbu, gini bu Bitcoin? Bitcoin bụ ego nke emepụtara na 2009. Ọ bụ otu ụdị ego dijitalụ na-agbanwe agbanwe. Ọ na - enyere ndị ọrụ aka ịkwụ onye ọ bụla ụgwọ n'otu ntabi anya. Bitcoin na-arụ ọrụ n'enweghị usoro iwu nchịkwa. Kama, Bitcoin na-eji teknụzụ ndị ọgbọ mee ihe. Ngwakọta Bitcoin na - eme ka nhazi nke azụmahịa na iwepụta ego. Satoshi Nakamoto mepụtara Bitcoin na mbụ. Anyị kwenyere na aha ahụ bụ utu aha ahụ onye malitere. Ọhaneze amaghị ezigbo aha mmadụ ma ọ bụ ndị mepụtara Bitcoin. E wepụtara Bitcoin na mbụ n'okpuru ikikere MIT.
A na-eji Bitcoin azụ ịzụta ihe na ọrụ na otu ụdị dịka ego ego. Ndị ọrụ nwere ike ịzụta pizza, kaadị onyinye Amazon, na ihe ndị ọzọ dị ka ego na kaadị akwụmụgwọ. Mgbe na-eche echiche banyere otú Bitcoin si arụ ọrụ, ọ dị mfe iji Bitcoin tụnyere iji kaadi debit. Mgbe onye na-ejide ụlọ ọrụ akụ na ụma na-eji usoro ego ego n'ịntanetị, ha na-enweta ego ego. Ndị na-ahụ maka ụlọ akụ ndị a nwere ike iji usoro ịntanetị ziga ma nweta nnyefe waya. Nnyefe waya a na - anọchite anya ego bara uru nke nwere ike wepu ya na akwụkwọ ego. Ọ ga-ekwe omume na Bitcoin. Enwere ike gbanwere Bitcoin maka dollar US, Euro, ma ọ bụ ụdị ego ọ bụla ọzọ. A pụkwara ịzụ ya ozugbo maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ.
N'adịghị ka ụlọ akụ, Otú ọ dị, azụmahịa ejiri Bitcoin emeghị ya n'etiti mmadụ. Tụkwasị na nke ahụ, ọ dịghị ụgwọ azụmahịa ọ bụla metụtara Bitcoin. Bitcoin enweghịkwa ihe ngosi achọrọ. Ọtụtụ ndị ahịa na-amalite ịnakwere Bitcoin na ụdị ndị ọzọ nke cryptocurrency. Bitcoin abụghị naanị ọnụọgụgụ nke ịntanetị. E nwekwara Ethereum, Litecoin, na ndị ọzọ. Bitcoin bụ nke a maara nke ọma ma jiri ya mee ihe.
Kedu ka ọrụ Bitcoin si eme?
Ihe ndị dị na Bitcoin
Ọ dị mfe ịmalite iji Bitcoin. Nzọụkwụ mbụ bụ iji smartphone ma budata ngwà nke na-enye ndị ọrụ ohere ịzụta ma ọ bụ kwụọ ụgwọ na Bitcoin. A na-akpọkarị ngwa ndị a dị ka BitPoin wallets. A na-akpọ ngwa na-ewu ewu na-akpọ Coinbase. Ndị ọrụ ga-eso ntuziaka na ngwa ahụ iji jikọta akaụntụ bank ma ọ bụ kaadị debit na ngwa ahụ. Ndị na-ede akwụkwọ aha njirimara na paswọọdụ jikọtara ọnụọgụ ego ego. Inyocha obere nkwụnye ego a na-eme n'ime otu ụbọchị atọ nwere ike jikọta ya.
A na-echekwa ihe ndị na-eri Bitcoin na ihe a maara dị ka blockchain. The blockchain bụ onye na-akọrọ ndị ọha na eze. All netcoin netwọk na-adabere na blockchain. Ihe niile ekwesiri ekwenye bu na edere. N'ụzọ dị otú a, Bittoin Wallets nwere ike gbakọọ ọnụ ọgụgụ ha na-efu. A ga-ekwenye na ọhụụ ọhụrụ nwere ike iji hụ na e ji Bitcoins eji eme ihe n'ezie. Iguzosi ike n'ezi ihe na usoro usoro oge nke blockchain ahụ nwere nchebe. A na-eme ha ka ha nwee ike iji nyochaa iji mee ka ndị ọrụ Bitcoin bụrụ ndị nzuzo.
Mmekọrịta Bitcoin na-enyefe uru dị n'etiti Bittoin Wallets. A na-edepụta azụmahịa ndị a na ngọngọ. Ngwongwo Bitcoin na-edebe data nzuzo na-akpọ a igodo nzuzo ma ọ bụ mkpụrụ. A na-eji data a banye na azụmahịa. Mbinye aka a na-eme dị ka ihe mgbakọ na mwepụ na ha sitere n'aka onye nwe obere akpa Bitcoin kwesịrị ekwesị. Na mbinye aka a na-ejikwa ya iji gbochie azụmahịa ahụ ka ọ bụrụ na onye ọ bụla gbanwere ya ozugbo e nyere ya. Oge nkwenye nke na-eso azụmahịa azụmahịa Bitcoin dị mkpụmkpụ. All azụmahịa na-agbasa ozi n'etiti ndị ọrụ. Ha na-emekarị netwọk na-egosipụtakarị ha n'ime ihe elekere 10.
Otu esi zụta Bitcoin
Ịzụta Bitcoin dị mfe. Iji zụta Bitcoin, ndị ọrụ na-egosipụta bọtịnụ ịzụta na ngwa ha na-eji dịka obere akpa Bitcoin. E nweelarịrị ejikọta akaụntụ akụ nke onye ọrụ na ngwa ahụ n'ihi na ọ dịghị mkpa ka ị banyeghachi ozi ịkwụ ụgwọ. Onye ọrụ ahụ na-abanye ego ha ga-achọ ịzụta. N'ikpeazụ, onye ọrụ clicks ịzụta na azụmahịa ejiri. Ọ dị mfe.
Anyị na-akpọ ebe ahịa dijitalụ, dịka ngwa ngwa nke ebe ndị mmadụ nwere ike ịzụta ego maka ego Bitcoin maka vidiyo na Bitcoin mgbanwe. Ụdị ihe dị otú a na-enye ụzọ nke ndị mmadụ nwere ike isi jiri ego ntanetị rụọ ọrụ maka dollar, euro, yen, wdg.
Jiri Coinbase Ngwa ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ kwụọ ụgwọ
A pụrụ iji Bitcoin mee ihe ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa na ngwa ngwa site na iji obere akpa Bitcoin, dị ka Coinbase. Na Coinbase ngwa, e nwere QR koodu akara ngosi nke enwere ike iji mee ihe na kọmputa iji mee ịkwụ ụgwọ na Bitcoin. Onye nnata ahụ a bu n'uche emetụ akara ngosi ahụ na QR koodu gosipụtara. Onye ọrụ ahụ nwere ike ịkekọrịta QR koodu ahụ, akara nke ihe odide ma ọ bụ adreesị ozi-e metụtara site na ederede na onye na-akwụ ụgwọ.
Otu esi enweta ego na Bitcoin Iji Coinbase
Ịkwụ ụgwọ dị mfe. Ndị a bụ ntụziaka dịka nke ederede a. Ọ bụrụ na ngwa ahụ agbanweela kemgbe ederede a, ụfọdụ ntụziaka nwere ike ịdị iche.
Họrọ akara ngosi "Akaụntụ" na ala nke ngwa Coinbase
Họrọ Bitcoin (BTC) obere akpa.
Họrọ akara ngosi QR na nri aka nri nke ngwa ahụ.
Họrọ "Gosi Adreesị"
Pịa "Ekekọrịta" ka ederede ma ọ bụ zipu adreesị Bitcoin gị ma ọ bụ "Adreesị adreesị" iji wee pịazie Bitcoin adreesị gị n'ime ederede ma ọ bụ email.
Ozugbo ịkekọrịtala adreesị Bitcoin gị na onye na-akwụ ụgwọ gị, ya onwe ya nwere ike ịgbaso "Otu esi akwụ ụgwọ onye ..." ntụziaka dị n'okpuru.
Otu esi akwụ onye na Bitcoin ụgwọ site na iji Coinbase
Iji mee ịkwụ ụgwọ Bitcoin nye onye ọzọ, onye ọrụ nwere ike ịrịọ ka ederede payee ma ọ bụ zitere nọmba Bitcoin ya.
Onye na-akwụ ụgwọ ahụ ga - pịa akara ngosi akara na ala nke ngwa ahụ.
Họrọ otu obere akpa Bitcoin (ma ọ bụ ego ọzọ dị mkpa).
Wee emetụ akara ngosi na aka nri aka nke ngwa Coinbase.
Na peeji na-esote, tinye ego.
Na ibe na-esonụ, detuo ma kpaa nọmba akaụntụ ma ọ bụ adreesị ozi-e metụtara na ngwa Coinbase. Tinye ihe nkwụnye ụgwọ kwesịrị ekwesị.
Pịa ọzọ. Mgbe ahụ kwado ịkwụ ụgwọ ahụ.
Nke a na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ dị ka ịmefe nnyefe ego site na iji ụtụ ego.
Bitcoin na-ewu ewu nke ukwuu n'ihi na ọ na-enye ndị ọrụ ọtụtụ abamuru karịa ego ego. Maka otu, ị nwere ike iji Bitcoin mee ịzụrụ ihe na nzuzo. Maka onye ọzọ, Bitcoin anaghị achọ NJ ọ bụla maka ojiji. Nke a na - eme ka ọ bụrụ ezigbo ego maka ndị na - achọghị ịnọgide bụrụ ndị amabughị. O dikwa adabara onye na-ezo ezo ma obu ndi bi n’ime ebe akpuchighi ego.
Ejikọtara sọftụwia Bitcoin nke ukwuu. N’ihi nke a, ikpe nke ịbụ ndị hapuru Bitcoin adịkarịghị ụkọ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okwu ikpe nile dị adị na-eme na mgbe onye nwe Bitcoin enweghị akpachapụ anya na paswọọdụ akaụntụ dijitalụ ha. Ọ bụrụhaala na-echebe paswọọdụ, Bitcoin na-enye nnukwu nchekwa karịa ego ego.
Ọ ga-adịrịrị onye ohi mfe izu ohi echekwara n’ụlọ n’ụlọ karịa ka ọ gaara adịrị ha ohi Bitcoin na-enweghị paswọọdụ. Ekpugheghi ihe ndekọ osisi nke na-edekọ ndị zụtara na ndị na-ere Bitcoin. Naanị ID ID nke akpa ọrụ nke ndị ọrụ Bitcoin ka ekpughere. Nke a na - enye ohere ka ndị ọrụ nwebigide ozi nzuzo siri ike mgbe ha na - eme ịzụta ihe na ịre ahịa mfe. Ojiji nke Bitcoin bụ ezigbo iwu. Enwere ike iji ya na ụdị azụmahịa azụmahịa ọ bụla n'otu ụzọ ahụ eji ego na kaadị akwụmụgwọ.
Jiri Mba Ofesi
Bitcoin enweghị oke ókè na achọghị ikike iji ya. Ka edere akwụkwọ a, obodo ọ bụla n'ụwa adịghị achịkwa ya. Nke ahụ nwere ike ịgbanwe. Ego a na - eme ntughari n'ihi na onweghi onye obula nwere ike igbochi ma obu ikwusi ire nke ego obula. Nkwụghachi ego mba ofesi dịkwa mfe iji na Bitcoin maka na ego ejikọghi ikike ọ bụla.
N'ihi nke a, a na-ewepụkwa ego ntụgharị ego. Iji Bitcoin na - ewepụ ego ndị ọzọ na - emekarị na azụmahịa azụmaahịa, dị ka ụgwọ kaadị akwụmụgwọ. Peoplefọdụ ndị na-azụta Bitcoin dịka ntinye ego. Ha na-eme nke ahụ n'olileanya na Bitcoin ga-abawanye uru na afọ. Akụkọ ihe mere eme nke ego ahụ gosiri na ọ ka nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na ọ ga-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na ọ nweghị ego. Ọ bụ ezie na anyị ahụla ka ihe na-eme ọfụma n'oge gara aga, anaghị ekwe nkwa na ọ ga-eme n'ọdịnihu.
Ntughari ego nwere ike idi nke ukwuu. N'ụzọ dị otú a, ịkọ nkọ banyere ọnụ ahịa Bitcoin abụghị ihe dị iche karịa ịkọ nkọ na ego ego. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Bitcoin bụ ụzọ ịzụta ihe. Itzọ ọ ga - aga, ọ bụrụ na onye ọzọ abịa, onye dị njikere ịkwụ ụgwọ karịa ka ị siri.
Uru mbu nke Bitcoin abụghị uru ọ bara dịka ego, ma na nzuzo nke ọ na-enye. N'ihi na ndị ọrụ Bitcoin enweghị aha ịdebanye aha ha, azụmahịa nọgidere na-adịtụghị ama. Ejighi ebi ebi ma ọ bụ debased Bitcoins. Naanị 21 nde bitcoins ga-adị. Ha enweghị ego na-akwụ ụgwọ, ha anaghịkwa ewere ohere ọ bụla. N'ihi ya, Bitcoin nwere ike igosi na ọ bụ ego ọhụrụ nke mba ụwa.
Bitcoin agaghị belata mkpa maka ugbo ala ndị dịpụrụ adịpụ maka nchebe ego. N'ezie, nke ahụ bụ eziokwu. Ojiji nke ụlọ ọrụ azụmahịa na mba ndị ọzọ nwere ike ịmepụta nzuzo na nchedo site na iji Bitcoin.
Enwere ike iweli nzuzo site na iji Bitcoin mee ihe site n'ịdenye akaụntụ dijitalụ nke metụtara Bitcoin na ụlọ ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ. Nke a na - emepụta nkewa nke dị n'etiti Bitcoin na onye nwe ha. N'ihi ya, usoro a dị ezigbo ọnụ maka nchedo ego. Nchedo kachasị mma maka Bitcoin nwere ike ịchọta site na iji ụlọ ọrụ dịpụrụ adịpụ.
Ụlọ ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ na-enye Bitcoin nchebe kachasị mma n'ihi na mba ndị dị ka Nevis, Belize na Cook Islands, ha enweghị ikpe ikpe ụlọ. N'ihi ya, ọ bụrụ na e kpee ikpe megide onye nọ na United States, ndị ahụ ga-akwụ ụgwọ nke onye ahụ ga-enwe oge siri ike ịhazi njide Bitcoin jidere na akaụntụ debanyere aha na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ị ga-achọ ịmatakwu banyere ozi Bitcoin nzipụ akụ? Ị nwere ike iji nọmba ma ọ bụ ụdị ajụjụ dị na ibe a iji soro onye ọkachamara zụrụ azụ nwee mkparịta ụka.
<Isi nke 12